AMD Radeon Software 20.30: yakaburitswa yeLinux uye nekuvandudza | Linux Vakapindwa muropa
AMD Radeon Software 20.30 iri pano kugoverwa kweGNU / Linux. AMD inonyatso kuzivikanwa suite yevatyairi veRadeon GPUs inounzawo kumwe kunonakidza kunatsiridzwa. Kunyangwe vatyairi vemahara vachishanda zvakanyatsonaka, kune avo vatambi avo vanoda kunyatso shandisa yavo kadhi yemifananidzo, hazvitomborwadzi kuve nemhando idzi dzesarudzo.
Zvino une tsigiro yemazuva ano distros senge Ubuntu 20.04.1 LTS (Focal Fossa) uye zvakare yeSUSE Linux Enterprise Desktop uye Server mune ayo mavhezheni 15 Service Pack 2 kana SP2. Ehezve, zvakare inotsigira zviri pamutemo vamwe seRed Hat (RHEL 7.8 na8.2) uye CentOS (7.8 na8.2), pamwe neshanduro dzekare dzeUbuntu dzakadai se18.04.4 LTS, nezvimwe.
Saka kana iwe uchishandisa AMD Radeon mifananidzo pakombuta yako, uye urikushandisa madhiraivha eimba iwe unofanirwa kugadzirisa kuRadeon Software vhezheni 20.30 kuti unakirwe nenhau dzese. Zvakare, yeuka kuti Radeon Software yeLinux inosanganisira ese ari maviri akavhurika AMDGPU uye akavhara AMDGPU-Pro. Uye nezve kurodha pasi kwayo, unogona kuzviita kubva ku zviri pamutemo webhusaiti...
Ndinodawo kutaura kuti zvinoenderana neGPUs dzakasiyana siyana kana makadhi emifananidzo kubva ku AMD. Pakati pe Radeon akatsigirwa ndivo:
AMD Radeon RX 5700, 5600 uye 5500 Series, ayo ari ekupedzisira.
AMD Radeon R9 Hasha, Hasha X uye Nano
AMD Radeon R9 380, 380X, 390 uye 390X
AMD Radeon R9 285, 290 uye 290X
AMD FirePro W9100, W8100, W7100, W5100, uye W4300 Series.
Sezvauri kuona, kune ese ari maviri makadhi emazuva ano uye mamwe kubva makore mashoma apfuura. Naizvozvo, kana distro yako uye kadhi rako remifananidzo rakatsigirwa, kubva zvino zvichienda mberi iwe unogona kunakidzwa nekuvandudzwa uye kugadziriswa kwakaitwa nevasimudzi ve AMD mune iyi vhezheni itsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » vatyairi » AMD Radeon Software 20.30 - Yakaburitswa yeLinux